၁-၁၀-၂၀ မှစ ၍ ကား အမည်ပြောင်း အခွန် ၃ % မှ ၆ % သို့ အခွန်ဦးစီး ဌာန မှတိုးကောက် ပါမည် ။ (ကားအမည်ပြောင်းဆောင်ရွက် မည့် မိတ်ဆွေများခဗျ) မိမိကား အမည်ဖောက် လုပ်ရန် အတွက် အရင်ဆုံး မိမိနေထိုင်ရာ မြို့နယ် အခွန်ရုံး
ဂတ်စ် မီးဖို အသုံးပြု သူ များ သိထား၊ သတိထား သင့် တဲ့ အချက် (၁၃) ချက်
ယနေ့အ ချိန် အခါမှာ မြန်မာပြည် အရပ်ရ ပ်ရှိ နေအိမ်များ၊ တိုက် ခန်းများ၊ စားသောက်ဆို င်တွေမှာ ဂတ်စ်မီးဖိုကို တွင်ကျ ယ်စွာအသုံးပြု လာကြတယ်။ ဂတ်စ်မီးဖိုကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင် ဖို့အတွက် သတိထားသင့်တဲ့ အချ က်လေးတွေ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အိုးအထွက် valve ၊
ကိုဗစ် ကြောင့် ခံစားရမယ့် နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများ….
Covid ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေဖြစ်နိုင်သလား ..? ကပ်ရောဂါကြီးတစ်ခု အပြီးမှာ ကျန်းမာရေး ၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး ၊ ပညာရေး စတဲ့နောက်ဆက်တွဲ အကျိုး ဆက်တွေကတော့ ခံစားရစမြဲပါ ။ Covid-19 ကြောင့်အနည်း နဲ့အများ နောက်ဆက်တွဲရောဂါတွေ ကို ခံစားရ( နိုင် ) ပါတယ် ။
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၇ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အော င်ဆန်းစုကြည်၏ စက် တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ ၎င်း၏ မဲဆန္ဒ နယ်ဖြစ်သော ကော့မှူးမြို့ နယ်သို့ သွားရော က်ရန် စီစဉ် ထားမှုကို ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ၏ သဘောမတူ သဖြင့် ဖျက်သိမ်း လိုက်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
မယုံနိုင်လောက်တဲ့ အချက်အပြုတ်စွမ်းရည်တွေကြောင့် ရေပန်းစားနေလျက် ရှိတဲ့ အသက် (14)နှစ် အရွယ် မိန်းကလေး (ရုပ်သံ)
Shwe | September 6, 2020
အသက် 14 နှစ်အရွ ယ်ကေ လးတွေ အတော်များများ ဟာ ကျောင်းစာ ၊ အိမ်စာ နှင့် သင်တ န်းတွေနဲ့ အလုပ်များနေပေမဲ့လည်း အချို့ကလေးတွေကတော့ မိဘတွေအပေါ်ကူ ညီစာနာစိတ် အပြည့်ရှိ ကြပါတယ် ။ မလေးရှားနိုင် ငံက အသက် 14နှစ်အရွယ် ကလေး မလေးဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းေ ကျာ
ယနေ့မ နက် ပိုးေ တွ့လူ နာစာရင်း မှာ ပါတဲ့ ဗဟ န်းမြို့နယ် က ၂ ယောက်စလုံး ဟာ အမေစု ရဲ့ ခြံအမှတ် ၅၄ က ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာမီ အမေစု ကော့မှူးသွားဖို့ ရန်ကုန်လာဖို့ ရှိတဲ့အတွက် မနေ့က တခြံလုံးကို swab ယူတဲ့အခါ
အမေစုကဗျာလေးကို သိန်း ၂၄၀၀ နဲ့ရသွားတဲ့ (အမည်မဖေါ်လိုသူ)လေလံပိုင်ရှင်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ် အ‌လေးနက်ဆုံး စကားတစ်ခွန်း
လေးစား ပါတယ်…တိုင်းပြည် …အတွက်တဲ့…တန်ဖိုးသိပုံများ အမေစုကဗျာလေးကို သိန်း ၂၄၀၀ နဲ့ရသွားတဲ့ (အမည်မဖေါ်လိုသူ)လေလံပိုင်ရှင်က အဓိပ္ပါယ် အ‌လေးနက်ဆုံး စကားတစ်ခွန်း ပြောသွားတယ် ဒီ”လေလံ”က တိုင်းပြည်အတွက်ပါတဲ့ Edit;ပုံထဲတွင်ပါဝင်သူများသည် လေလံအောင်သူ မဟုတ်ပါဘူးနော် crd org Unicode လေးစား ပါတယျ…တိုငျးပွညျ …အတှကျတဲ့…တနျဖိုးသိပုံမြား အမစေုကဗြာလေးကို သိနျး ၂၄၀၀ နဲ့ရသှားတဲ့ (အမညျမဖျေါလိုသူ)လလေံပိုငျရှငျက
ကြမ်းခင်းဈေး ၅၄ သိန်းကစတဲ့ အမေ စု လက်ရေး ကဗျာ စာရွက် ကို သိန်းနှစ်ထောင့်လေးရာ နဲ့ လေလံအောင်
ကြမ်းခင်းဈေး ၅၄ သိန်းကစလို့ ဈေးတိုးမြင့်ပေး လာကြ ရာမှ သိန်း ၂၄၀၀ အထိရောက် ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကဗျာရဲ့တန်ဖိုး အမေစုကိုချစ်ေ သာစိတ်ဓါတ်ြ ဖင့် အပြိုင်အဆိုင် ဝင်ရေ က် လေလံဆွဲကြတာ အားရစ ရာကောင်း လှပါတယ် ကဗျာဆရာ ဒါရိုက်တာ မင်းထင် ကိုကိုကြီး (2011) ခုနှစ်ကဗျာပွဲတော်ကိုယူသွားဖို့ ကဗျာဆရာတစ်ယောက်
ရှေးယခင် ကတ ည်းက မြန်မာတို့ဟာ အတိတ် နိမိတ် ကို ယုံကြည်တဲ့ လူမျိုး များဖြ စ်ပါတယ်။ ခုချိန်ထိ တိုင်အောင်လည်း ယုံကြည်ကြ သူများရှိပါသေး တယ်။ အတိတ် ဆိုသည်မှာ ဖြစ်ခဲ့၊ ဖြစ်ဆဲသော အခြင်း အရာတို့ဟာ နောက်တစ်ချိန်တွင် တစ်ကျေြာ့ ပန်ဖြစ်နိုင်တယ် ၊ နိမိတ်ကောက်ရ န်အြေ
မျက်နှာကို ကြည့်ရုံနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝ သူ တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်ချေ ရှိမရှိ သိရှိနိုင်မယ့်နည်းလမ်း
Shwe | September 5, 2020
လူတစ်ယော က်ရဲ့မျ က်နှာကိုကြည့်ရုံနဲ့ သူ့အြေ ကာင်းကို အတိအကျပြောနိုင်တဲ့ ရုပ်လက္ခဏာကိုဖတ် တဲ့ ပညာမျိုးဆို တာ အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ပ ညာတစ်မျိုးဖြစ်ပါ တယ်။ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်က ကံကကြမ္မာကို မသတ်မှ တ်နိုင်ပေမယ့် ဘာတြွေ ဖစ်လာ နိုင်သလဲဆို တာကိုတော့ အနီးစပ်ဆုံး ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်ရိုးရာရုပ်လက္ခဏာဖတ်ပညာအရ လူချမ်းသာတစ်ေ ယာက်ဖြစ်လာနိုင်ေ